Sanatar Ilyaas: Dhul uu Ciidanka Cirka Soomaaliya leeyahay ayaa shirkado gaara qaadanayaan – Kalfadhi
Guddiga Qeyraadka Qaranka iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha ee Golaha Aqalka Sare ayaa sheegay inuu Taliska Ciidanka Cirka Soomaaliya kala shaqeynayo xal u helista dhul uu sheegay Talisku iney shirkado gaar loo leeyahay ku doodayaan iney Xukumadda Soomaaliya u ogolaatay iney si gaar ah u isticmaalaan. Guddigu waxa uu sheegay inuu Talisku u soo gudbiyey arrinkan, siyuu sifa sharciya ugu wajaho kiiskan.
Ilaa 2015-kii ayuu Guddigan sheegay iney hadba dhulkaas imaanayeen shirkado gaar loo leeyahay, oo qaarkood dibadda laga leeyahay, kuwaas oo uu Talisku sheegayo inuusan ka war hayn, uuna ka difaacayey iney dhulkaas isticmaalaan. Inta jeer ee ay shirkadahaas soo doonteen dhulkaas, si ay ugu qabsadaan danahooda gaarka ah, waxa uu Talisku sheegay iney ka hor istaageen, sida uu sheegay Guddoomiyaha Guddiga Qeyraadka Qaranka iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha, Senatar Ilyaas Cali Xasan.
“Dhul 20 kun oo mitir oo isku wareeg ah waaye dhulka leysku haysto ee la qaadanayo” ayuu yiri Senatar Ilyaas. Waxa uu sheegay in kuwa sheeganaya dhulkaas iyo cidda bixisayba ay kula xisaabtamayaan arrintaan, si waafaqsan sharciga, sida uu hadalka u dhigay. “Cid kasta oo bixisay dhulkaas waxaan ka gudaneynaa waajibka nooga aadan” ayuu yiri Senatar Ilyaas, waxa uuna intaas raaciyey iney arrintan la wadaagayaan dhamaan Golayaasha Dowladda, iyo kuwa ay sida gaarka ah u quseyso.
Taliyaha Ciidanka Cirka Soomaaliya Dable Bayloot ayaa sheegay in shirkadaha ku doodaya iney Xukumaddu siisay dhulkaas, iyadoon Talisku ogeyn, ay fara badan yihiin, wuxuuse ka carrab dhabay Leaf and Tobacco. Balse, Senatar Ilyaas ayaa isna shirkadahaas ka carrab dhabay Hormuud, oo gudaha laga leeyahay. Senatarku waxa uu sheegay in sanadihii 2015 iyo 2016 ay sidaan oo kale dhulkaas u sheegteen shirkado ajanabi ah, markii ay Xukumadda Kheyre timidna ay markale soo laba kacleysay isla arrintii oo kale.
“In ay Xukumaddu u ogolaato shirkadahaas iney isticmaalaan dhulkaas, si kumeel-gaar ah, wax dhiba ma leh, Dhulka Ciidanka Cirkana cidna ma qaadan karto” ayuu yiri Taliye Bayloot. Waxa uu sheegay iney shirkadaha dhulkaas doonaya ku jiraan kuwa ay Soomaali iyo ajanabiba isla leeyihiin.